Imba - License Yevatyairi Vangu
Tenga Chaicho Magwaro Pamhepo
Rezinesi rekutyaira Pamhepo
Chaiyo / Pasipoti Fake
Chaiwo / Fake ID Kadhi
Nyorera Yekutaura VISA
Yemagariro Chengetedzo Nhamba (SSN)
Zvepamutemo / Fake Land Titles
Yakagadziriswa Bhizinesi Statement
Zvitupa zveChikoro & maDiploma
Kunyoreswa Chitambi Chekutyaira pasina Bvunzo
Nyorera rezenisi rekutyaira
Chibvumirano Chekutyaira Pasi Pose (IDP)
Express Mutyairi's Rezinesi Mutengo
Vandudza, Chinja rako Rezinesi rekutyaira
Tenga Pasipoti Yechipiri
Raira Dhipatimendi Pasipoti
US Green Kadhi Pamhepo
Yechokwadi Express Pasipoti Pamhepo
Nyorera Pasipoti Pamhepo
DL Zvikamu A, B, C
Maitiro Ekurodha Pamhepo
Tenga License Yekutyaira Pamhepo
Kwekuodha rezinesi rekutyaira online muEurope Uri kuGermany, kana chero…
Tenga Residence Mvumo Pamhepo
Tenga Mvumo Yekugara Pamhepo uye ugare muEurope, America, Canada PaMDL, unogona…
Tenga Real Express Pasipoti Pamhepo
Express Canadian pasipoti Pamhepo inotengeswa Tora chaiyo, inoshanda yechokwadi inoratidzira pasipoti yekuCanada ine biometric…
Maitiro Ekubhadhara Kwazvo Zvinyorwa
Bhadhara magwaro kuburikidza neBitcoin Unoziva here neBitcoin? Ndiyo yakanyanya kuvimbika crypto…
Tenga Real Express Documents Online
Unoda gwaro pamhepo uye unorida nekukurumidza? Kutsvaga kunofanira kupera! Pano pa MDL, tinoburitsa magwaro ako angave ekutanga kana emanyepo munguva pfupi pfupi. Isu tingori nani sezvo isu tichipa nzira yakajeka yekuwana magwaro pasina kuenda nemaitiro akareba & protocol. Wakamirira chii?
Odha Mapasipoti Akanyoreswa
Isu tinogadzira mapasipoti enyika dzinopfuura zana nemakumi maviri. Chinangwa chedu chikuru chiri muEurope, USA & Canada. Unogona kutarisa!
Tarisa mapasipoti edu
Tenga Database yakanyoreswa rezinesi rekutyaira
Pano, unogona kuhodha rezinesi rekutyaira chairo pasina kutora chero bvunzo. Kugadzirwa kunowanzo kunotora 3-5 mazuva ekushanda!
Bhurawuza Marezenisi edu eVatyairi
Yedu Documents Services
Raira Rezinesi reMutyairi pasina Muedzo 2022
Waneta nekutora bvunzo dzekutyaira uye bvunzo asi usingabudiriri? Unoziva kutyaira asi usina rezinesi rekutyaira? Kana iwe uchitsvaga kwaunotenga rezinesi rekutyaira online saka izvi ndizvo. Isu tiri boka revashandi veIT vanokuwana iwe rezinesi rekutyaira chairo mumazuva matatu-3 ekushanda chete. Unogona kushandura rezinesi rako rekutyaira rekunze, vandudza rezinesi rako rekutyaira pano. Tisu chete vakanaka. Wakamirira chii? hurongwa ikozvino
Tenga Registered Travel Passport
Iwe uri fan wekufamba? Kutsvaga pekupotera? Zvese zvaunoda kuti uite kutenga pasipoti yechokwadi online pano. Isu tinoburitsa pasipoti yako mumazuva ekushanda 5-6. Yakanyoreswa mumadatabase ehurumende. Kana iwe uchida pasipoti yekunyepedzera, tinokutorera iwe nemutengo wakaderera. Gwaro repasipoti remanyepo harina kunyoreswa mudura rekushandisa.Tinoburitsa mapasipoti enyika dzese pasirese kunze kweBolivia. Tora ikozvino.
Chitupa chiri kutengeswa
Iwe uri pasi-makore uye unoda kushanyira makirabhu ehusiku kana makasino? Tinogona kuita kuti zviitike pano nekukutora iwe zvakanyanya scannable ID makadhi. Iwe haudi kuzivikanwa setsotsi munyika yako, handizvo here? Tenga US, EU uye UK ID makadhi online pano uye chengetedza mari. Chitupa chinogadzirwa uye chinonyoreswa mumazuva matatu chete. Inounzwa zvakananga kumusuwo wako kuburikidza neDHL, UPS, EMS. Tora ikozvino
NCLEX Zvitupa Mutengo 2022
Iwe zvechokwadi unoda kuve mukoti kana vashandi vekurapa muUS saka nyika yese, handizvo? Unogona kuchengetedza nguva pano kushandisa uye kuodha NCLEX zvitupa kubva MDL. Isu tinokutorera iwe chitupa mukati memazuva 2-3 ekushanda chete. Mutengo wekutanga wekutora imwe yebvunzo dzeNCLEX imadhora mazana maviri kana uchitsvaga rezinesi kuUS Zvichienderana nekwaunogara, bhodhi renyika yako revakoti ringangoda imwe mari yekunyoresa. Asi pano, tinoiwana nekukurumidza kupfuura zvakajairwa uye hautore chero bvunzo saka mutengo wepamusoro. Tora ikozvino
Tenga Residence mvumo online
Ugari hunovimbiswa pano pa MDL. Unoda kutenga mvumo yekugara online? Yakakwana nguva uye nzvimbo. Pano, tinokutorera mvumo yekugara mukati memazuva 3-4 ekushanda chete. Iyi mvumo yekugara yatinogadzira iri pamitengo inonzwisisika. Isu tinopawo mvumo yekushanda kana iwe uchida kushanda kunze kwenyika. Wakasununguka kugara muUS, EU, UK, Australia uye chero kondinendi yaunosarudza mushure mevhiki imwe chete mushure mekunge watibata. Kuregererei bata izvozvi uye kuwana mvumo yekugara
Odha Zvese Zvinyorwa mumazuva matatu
PaMDL, tinogadzira zvakasiyana siyana zvezvigadzirwa nemasevhisi. Tangodoma mashoma. Vamwe mamwe magwaro tinogadzira tiri;
Bank statements, Zvitupa Zvekurapa, SSN, IELTS uye TOEFL, Mazita Enzvimbo, Chikoro Diploma & Zvitupa etc.
Ese magwaro ambotaurwa anowanikwa pano. Isu tinoita shuwa kuti tinokuwanira iwe zvakanakisa kana iwe uchiodha Zvitupa kubva kwatiri. Tora ikozvino
Zvinotaurwa nevamwe vevatengi vedu nezvedu Documents Services
Ndakange ndafoira miedzo yekutyaira yakawanda. Aka kaive kekutanga kunyorera rezinesi rekutyaira reGerman uye pasipoti ine MDL. Zvakanga zviri nyore uye vaishanda nesu kugadzirisa chero nyaya nekukurumidza, kunyangwe magwaro akashaikwa kana akarasika uye takagamuchira mapasipoti edu nerezinesi rekutyaira patakavimbiswa. Akanyanya kukurumidza masevhisi Guys. Super kufara !!! Jurgen Neuer D. Augsburg, Germany
Jurgen Neuer D.Mutevedzeri
Ndakatanga ndafunga kuti itsotsi. Zvese zvakaitika nekukurumidza. Ndakambobirwa 5,000 euros kumwe kunhu. Ndakabva ndafunga kumboyedza kekupedzisira paMDL. Matenga akanaka, vakagadzira rezinesi rangu rekutyaira reSweden mumazuva matatu chete. Ndakazoenda kuhofisi yeTransportstyrelsen kunotarisa uye yakanyoreswa! Kungofanana nemashiripiti !!! Nhasi murume wangu nemwanakomana wangu vakazowana pasipoti yeSweden & rezinesi rekutyaira reRomania pano. Ndatenda vakomana! Hug!!!
Mhoro, Ndapota edza kukurumidza nguva inotevera. Ndakakumbira mvumo yekugara yekuCanada- Green card uye land certificate kubva kwamuri vakomana. Sezviri pachena, wakatora nguva yakareba kupfuura yaitarisirwa. Ndinofara kunyangwe ndawana magwaro angu. Ramba uchiita basa rakanaka!
Ndinongoti thank you guys. Ndava mugari weEU akazara. Ini zvino ndine EU Passport (Belgium), Birth Certificate, Id Kadhi uye Rezinesi reMutyairi. Ndingangoda mamwe magwaro kubva kwauri. Saka zvirokwazvo ndichakubata iwe zvakare. Ndotenda zvikuru. Rita G. Brussels, BG.
Rita G.Bhizimusi mukadzi
Ndakanga ndatsvaga pekuiwana Pilot license neBoat license online pasina chandakawana. Kutenda kune MDL ndivo chete vari kupa masevhisi aya. Vanoshamisa! Ini zvino ndoshandisa Private Pilot rezinesi randakawana pano ndakasununguka. Ini ndichakupa mwero wenyeredzi 4.5! Handikwanise kukupa mese 5 zvakadaro...hahahaha!
Jim MorenoYakavanzika Mutyairi wendege
Data Verification & Chengetedzo
Zvinyorwa zvedu zvepakutanga zvakaedzwa zvakasimba uye zvinosimbiswa. Nekudaro, chero munhu anogona kuona gwaro nekushandisa webhusaiti yehurumende uye nekuisa Telepoint kodhi kana dhisiki rekuongorora iro rinopihwa kune rimwe nerimwe gwaro. tinokutungamirira kuti ungaita sei zvose izvi paunorayira magwaro kubva kwatiri.
Client's Data Privacy: Yako data yakachengeteka zvakanyanya nesu. Hatibudisi pachena chero pasina mvumo yako. Saka semutengi wedu kana uchitenga magwaro ekutanga kana emanyepo kubva kwatiri, wakachengeteka!
Zvishandiso zvedu zvakanyanyisa:
Isu tine hukama hwakasimba nevamiriri vehurumende vanotipa zvinhu zvakanakisa zvinodiwa pakugadzira magwaro chaiwo. Isu tinoshandisa zvemhando yepamusoro senge bepa rakakosha, intaglio kudhinda, micro printing, uye fluorescent dhayi izvo zvisingaonekwe nemeso asina kupfeka uye mimwe yemuchina wekuyedza zvakare. Nekudaro, isu hatikurudzire magwaro emanyepo uye takayambira vatengi vedu kuti vangotsvaga magwaro chaiwo, mapasipoti, maID, nezvimwe zvinogona kuwanikwa kune dzimwe nyika zvakare.
Mapepa edu chaiwo anogadzirwa tichishandisa zvese zvine hungwaru saka; hapana mukana wekukundikana. Mapepa edu chaiwo ane ese akakosha ekuchengetedza mamaki ayo anobvumira kuti ipfuure ese mazinga ekuongorora uye kuongororwa
Paunoodha mapasipoti, mavhiza kana mamwe magwaro kubva kwatiri, tinokukurudzira kuti upe zvinotevera: Isu tinoshandisa zviziviso zvako zvakasiyana zvinosanganisira zvigunwe, ruoko geometry, earlobe geometry, retina uye iris mapatani, masaisai ezwi, DNA uye siginicha uye zvakafanana mune yakagadziridzwa mu. dura rehurumende. Saka, kana zvichidikanwa, ruzivo rwako rwebiometric runogona kuwanikwa kubva chero kupi uchishandisa hurongwa hwehurumende. Kana iwe uine chero kusawirirana kweruzivo kana rekodhi rakashata, nyanzvi dzedu dzinogona kuvatsiva neimwe nyowani uye kuvagadzirisa mumaziso ehurumende.
Yambiro!!! Chenjerera vanobiridzira uye scams!
Kune akawanda ekunyepedzera magwaro ekupa anowanikwa online anongopa akachipa uye emanyepo magwaro anovanza kunge iwo chaiwo. Ngwarira uchitenga magwaro online sezvo kukanganisa kwako kunogona kukukonzera dambudziko guru. Asi nesu, wakachengeteka zvachose. Isu tinoona kuti ese magwaro edu echokwadi 100% echokwadi uye akanyoreswa mudura rehurumende rinosangana nemamiriro ese ehurumende. Kunze kweizvi, isu zvakare tinoona kuti ruzivo rwako runoramba rwuri mukati medu neakawanda akaturikidzana ekuchengetedza uye kuvanzika. Unogona kutarisa izvo zvedu vanogutsikana vatengi vanoti nezvedu. Iwe unogona kugadzirisa musangano wemahara nevanopa mazano edu nyanzvi kuti vakubatsire kugadzirisa matambudziko ako. MDL ndiyo chete nzvimbo yakanakira iwe!
Refund Policy: Mune chero zvinyorwa zvisina kuendeswa kana zvimwe zvinokanganisa, 99.00% yemari yako inodzoserwa kwauri nenzira imwechete yekubhadhara!
Mari yakadzoka chivimbo 99%
Mutengi kugutsikana 97%
Yedu yekugadzira Nhamba
Zvinyorwa zvinogadzirwa pamwedzi
Mapepa akazara akagadzirwa
Tenga Rezinesi Rezvikepe muFlorida neLondon
Nyorera Multi-crew Pilot License-MPL muEurope
Yechokwadi Yakavanzika Pilot License PPL yekutengesa
Maitiro ekutenga Yekutengesa Pilot License-CPL online
Taura nesu pano kuodha zvinyorwa zvako
Runhare ex: +49 1521... *
Tenga EU License Yekutyaira
Tenga UK Kutyaira License
Tenga US License Yekutyaira
Mamwe marezinesi ekutyaira
Dudziro kumutauro wako
Titumire meseji kuburikidza neWhatsApp pano
Tinogona sei kukubatsira iwe ndapota?